Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee koontadaada 'Instagram'? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee koontadaada 'Instagram'?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 399
Shaki kuma jiro in shabakadaha bulshada ay yihiin weelka ay ku nool yihiin malaayiin isticmaale wax yar oo noloshooda ka mid ah. Waxay tan ku sameeyaan siyaabo kala duwan, iyadoo la daabacayo sawirro, fiidiyowyo, kooxo, wada-hadallo, faallooyin, feylal maqal ah, iyo siyaabo kale oo badan.
Si kastaba ha noqotee, way ku habboon tahay, markaad marinayso shabakaddaada, inaad si ammaan ah u sameyso. Si tan loo sameeyo, waa inaad haysataa lambar sir ah iyo adeegsade lagu kalsoon yahay. Sidoo kale, xooji habab kale oo nabadgelyo, sida xaqiijin labalaab ah, iyo kuwo kale oo badan.
Gaar ahaan marka aad koontadaada ka gasho qalabka aan gebi ahaanba ammaan ahayn. Iyo xitaa markay jiraan, had iyo jeer waxaa jira qof sugaya inuu sameeyo galitaan ama u ekeysiin adeegsadayaasha. Dhibaatooyin badan oo spam ama xisaab jabis ah ayaa la soo sheegayaa, sababo la xiriira khalkhal gelinta amniga ee internetka.
Ogow dariiqa loo beddelo lambarkaaga sirta ah ee 'Instagram'
Xoojinta sir ahaanta xogtaada ayaa ah tiirka aasaasiga ah ee shirkadaha shabakadaha bulshada Instagram-na kama reeban. Shabakaddan, amniga koontadaadu waa muhiim, sidaa darteed waxay ku siineysaa hawlo taxane ah si aad ugu hagaajin karto ugu badnaan.
Raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida loo beddelo lambarka sirta ah ee koontadaada 'Instagram'.
Kadib markaad gasho koontadaada xogta lagama maarmaanka u ah tan, waa inaad heshaa qaybta "amniga" gudahood dejinta astaantaada
Si aad u gasho qaybtaan, waa inaad ku qortaa koontadaada adoo adeegsanaya sawirkaaga astaanta ama astaamaha hoose ee midig, iyadoo kuxiran inaad ka gashay webka ama barnaamijka Instagram Gudaha astaantaada, ku hel astaanta saddexda garaac ee jihada ah dhinaca midigta sare ee is-dhexgalka.
Markaad gasho qaybta qaabeynta, waxaad ka heli kartaa qaybta "badbaadada"
Xulashada "amniga", waxaad ku arki doontaa qaybo taxane ah, halka midka hore, min kor ilaa hoose, uu yahay "ereyga". Markaad soo gasho, waxaad ka heli doontaa sanduuqyada si aad u beddesho. Waa inaad ku rido lambarka sirta ah sanduuqa koowaad iyo lambarka sirta ah labada sanduuq ee harsan.
Si loo dhammeeyo nidaamka, guji ereyga "xariif ah", geeska midig ee kore.
Qeybtaan waxaad sidoo kale kaheleysaa suurtagalnimada inaad soo ceshato lambarka sirta ah haddii aad ilowday, adoo riixaya qaybta "Ma ilowday furaha sirta ah?".
Tilmaamaha qaarkood si aad u xoojiso amnigaaga
Waa inaad si joogto ah u bedesho eraygaaga sirta ah. Gaar ahaan markaad si joogto ah uga dhex gasho aaladaha dadka kale.
Markaad naqshadeynayso eraygaaga sirta ah, isticmaal isku-darka xarfaha waaweyn, astaamaha, xarafka yar iyo lambarrada. Hadba sida isku dhafan ee isku dhafan ee jilayaasha, ayaa ka sii adkaan doonta in la fahmo.
Haddii aad isticmaasho akoonno badan isla waqtigaas, Ha u wada isticmaalin erey sir ah isku mid.
Marna ha ogolaan inaad keydiso taada password markay ka codsadaan biraawsarka aad isticmaaleyso.
Sabab la'aan ayaad u isticmaashaa iskudhaf fudud qasaarooyinkaaga
1 Ogow dariiqa loo beddelo lambarkaaga sirta ah ee 'Instagram'
2 Tilmaamaha qaarkood si aad u xoojiso amnigaaga
Sidee loo keydiyaa wadahadallada Telegram?
Sideen ugu keydin karaa sawir Instagram-ka?